नेकपाको पार्टी कार्यालयमा खैलाबैला ,प्रचण्डले भने के हो जानकारी गर्नु पर्दैन ? – Ranga Darpan
नेकपाको पार्टी कार्यालयमा खैलाबैला ,प्रचण्डले भने के हो जानकारी गर्नु पर्दैन ?
पुष ५ ,काठमान्डौ – रास्ट्रपतिले नेकपाका स्थायी सदस्यहरुलाई शितल निवासमा बोलाउँदा पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा खैला बैला सुरु भएको छ ।
रास्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले नेताहरुलाई शितल निवासमा बोलाएर छलफल गरेकी हुन् सितल निवासमा नेताहरु पुग्नुभन्दा अगाडी धुम्बाराहीमा ठूलै हलचल मच्चाएको छ ।
भण्डारीले मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटीमा रहेका नेताहरूसँग राजनीतिक र आर्थिक विषयमा छलफल गरेकी छिन ।
राष्ट्रपति भण्डारीले शनिबार बिहान नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा प्रभाकर, देवेन्द्र पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल लगायतलाई बोलाएकी थिइन् ।
तर नेताहरुले पार्टी अध्यक्षलाई खबर गरेका थिएनन् ।तर यो कुरा प्रचण्ड सम्म भने पुगिसकेको थियो ,तेसैमा धुम्बाराहीमा स्थायी कमिटी बैठक सुरु हुँदा पनि शतिल निवास गएका उनीहरु आइपुगेका थिएनन।
तेतिखेर सम्म शितल निवासमा बैठक चलिरहेको थियो ।तेही बेला एक साथ् नेताहरु आएपछि प्रचण्ड आक्रोसमा बोलेका थिए उनले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र दुई अध्यक्षको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा पनि आफू र अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शीतल निवास जानु कमजोरी भएको स्वीकार गरे ।
अहिले फेरी पार्टी बैठक चलिरहेको बेला स्थायी कमिटि सदस्यहरुलाई बोलाउँदा नकारात्मक संदेश जाने त होइन तर रास्ट्रपतिले बोलाएपछि नजाने भन्ने त होइन तर मलाई जानकारी त गाराउनु पर्यो नि यो पद्धति हो कि होइन ?’
एक नेताकाअनुसार प्रचण्डले सहजै रुपमा आफू अघिल्लो पटक गएको कमजोरी स्वीकार गरेका थिए र शनिबार गएका नेताहरुलाई पनि आक्रामक रुपमा नै प्रश्न गरेका थिए ।
त्यसपछि अध्यक्ष प्रचण्डले हस्तक्षेप गरेर राष्ट्रपतिबारे पार्टी बैठकमा छलफल नगरौं भनेर रोकेका थिए । आफूले विधि पद्धतीको कुरा उठाएको र के भएको हो भनेर जान्न चाहेको भन्दै उनले भने, ‘नेताहरुले थाहा दिनुभयो, सकियो । थप छलफल नगरौं ।
नेकपाको २० गते केन्द्रीय समिति बैठक आवहान ,
झोलुङ्गे पुलको बजेट कांग्रेसले ल्याएको होइन भन्दै हाँसे नगर प्रमुख भन्छन नेकपाका भन्दा हाम्रा नेता कार्यकर्ता बुद्दि नभएका लास्ट फालीएका छन्,